Mashandisiro ekushandisa nyowani mimhanzi maficha muIOS 10 | IPhone nhau
Mashandisiro ekushandisa nyowani mimhanzi maficha muIOS 10
Jose Alfocea | | Zvidzidzo uye zvinyorwa
Nekusvika kweIOS 10, Mumhanzi app ye iPhone ne iPad yawana gadziriso huru nechinangwa chekurerutsa nekurerutsa mashandisiro ayo.
Mune yakagadziridzwa Music app zvese zvakakura, zvakajeka uye zvakanyanya kutaridzika. Izvo zvikamu zvakagadzirwazve kuti zvijekese. Iyo Raibhurari tebhu inouya kutanga kuitira kuti iwe ugone kufamba nenzira yako wega mimhanzi Kubva pakutsvaga tebhu, ikozvino zvave nyore kuwana nziyo. Uye iyo Unganidzo chikamu chanyangarika kubva pakuona. Muchikamu chino tichaenda kukuudza mashandisiro ekushandisa iyo nyowani iOS 10 Music app uye uwane zvakazara mairi.
1 Dhawunirodha mimhanzi yekuteerera kunze kwenyika
2 Wona nziyo dzakadzokororwa
3 Tsvaga nziyo
4 Bvumira otomatiki kurodha pasi
5 Gadzirira kuchengetedza
6 Ona mazwi enziyo
7 Teerera mune shuffle mode
8 Edit «Next»
9 Iwo matsva smart zvinyorwa
10 Nyowani Beats 1 dhizaini
Dhawunirodha mimhanzi yekuteerera kunze kwenyika
Kuti utore nziyo kana maalbum, Chinhu chekutanga chauchazofanira kuita kuwedzera ivo kuraibhurari yako.ku. Kuti uite kudaro, iwe unongofanirwa kubaya "+" bhatani raunowana padyo nerwiyo, dambarefu kana playlist.
Paunenge waita izvi, bhatani "+" rinotsiviwa ne "Dhawunirodha" bhatani. Dzvanya pairi uye iwe uchaona kuti kufambira mberi kwekurodha pasi kunotanga sei. Kamwe kurodha pasi kwapera, meseji inoyerera pachiratidziri inokuzivisa nezve izvi.
Wona nziyo dzakadzokororwa
Kuti uone nziyo dzawakadhirodha ku iPhone yako kana iPad, enda kuRaibhurari chikamu uye uchaona zvikamu zvinoverengeka kumusoro kwechiso izvo, nenzira, iwe unogona kugadzirisa. Dhinda painoti "Downloads" uye uchakwanisa kuona mimhanzi yese yawakadanha yakarongedzwa kubva kuchangobva kuitika kusvika kudiki.
Muchikamu chepamusoro chehwindo idzva, uchakwanisa kudzora mimhanzi yakadzingwa yaunotarisa nekusarudza pakati pe "Playlists", "Artists", "Albums" kana "Songs".
Kutsvaga nziyo mune nyowani yeMusic app yeIOS 10 zviri nyore kupfuura nakare. Dzvanya pane "Tsvaga" tab (pazasi kurudyi) uye tanga kutsvaga. Neimwe nzira, iwe unogona zvakare kubvunza Siri kuti aridze rwiyo, dambarefu, kana playlist yako. Pane iyo "Tsvaga" skrini iwe uchaonawo zvako zvazvino zvekusecha uye mafambiro, kuti iwe ugone kuenda kunyange nekukurumidza.
Bvumira otomatiki kurodha pasi
Iwe unogona kuvhura otomatiki Ekurodha ficha kuti utore otomatiki chero chaunowedzera kuraibhurari yako. Kune izvi iwe unofanirwa kutanga wagonesa iCloud Music Library uye mushure meizvozvo, enda kuZvirongwa -> Music -> otomatiki kurodha pasi.
La kuchengetedza optimization Iyi sarudzo nyowani yaunowana mune yeApplication application. Nayo iwe unozogona kumisikidza muganho wenzvimbo iyo iyo mimhanzi yakadzorwa ichagara. Izvi zvinonyanya kubatsira kana iwe uine 16GB iPhone kana iPad, se unogona kudzora mimhanzi yakadzvanywa kusvika 2 kana 4 GB. Paunenge iwe wasvika iwo muganho, Nziyo dzekare dzinotanga kudzimwa kubva pane chako chishandiso chinosiya nzvimbo yeMumhanzi mutsva.
Ona mazwi enziyo
Iyo Music app muIOS 10 inoenderana neiyo nziyo dzerwiyoHongu, havasi vese varipo izvozvi. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kutsvedza skirini yenziyo yauri kuteerera uye tinya pane inoenderana sarudzo pazasi.
Teerera mune shuffle mode
Kubva pane chero dambarefu, runyorwa kana muimbi, kumusoro, unogona kuridza dzese nziyo dzirimo nekungodzvanya izwi rekuti "Random" raunozoona pamusoro pemusoro werwiyo rwekutanga.
Kubva pane rwiyo rwekutamba skrini, swipe kumusoro uye iwe uchaona iwo maratidziro enziyo dzese mune iyo "Up Inotevera" runyorwa. Chimwe nechimwe chazvo chine chiratidzo chine mitsetse mitatu kurudyi, chibate pasi uye udhonze mudenga kana pasi kuti utamidze rwiyo.
Kana iwe uchida kuibvisa kubva pane iyo runyorwa, ingo tsvedza musoro kuruboshwe uye iyo "Bvisa" aeon ichaonekwa.
Kana iwe uchida kuwedzera rwiyo kune iyo 'Up Inotevera' runyorwa, tinya uye ubate musoro waro uye kubva pane zvingasarudzika menyu sarudza 'Tamba Gare gare' kana 'Tamba Gare gare'.
Iwo matsva smart zvinyorwa
Nepurogiramu nyowani yeMumhanzi uye neApple Music sevhisi iwe zvakare unowanikwa maviri matsva smart zvinyorwa, imwe yakatsaurirwa kumimhanzi yako yaunofarira (iyo inovandudzwa Chitatu chega chega), uye imwe inokupa iwe mimhanzi nyowani zvichibva pane zvaunofarira uye maitiro ekuteerera (ayo anovandudzwa Chishanu choga choga). Unogona kuwana zvese zviri pamusoro peiyo «Yewe» chikamu.
Nyowani Beats 1 dhizaini
Beats 1 peji yakagadzirwazve. Iye zvino iwe uchaona iyo runyorwa rwezvose zvirongwa nekutsvaira pasi. Iwe unogona kubata pane show kuti uone ese episodes. Tinya episode kuti uwane rumwe ruzivo uye kutanga kuitamba.
Iwe unofungei nezve dzese nhau muMumhanzi weIOS 10? Iwe unofunga kuti mashandisiro ayo akavandudza kana kuchine basa rekuita?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Mashandisiro ekushandisa nyowani mimhanzi maficha muIOS 10
Yakavandudza zvakanyanya hongu, asi haindibvumidze kuti ndigadzirise mutsara wekutamba
Dany ruiz akadaro
Idzo sarudzo dzinongoshanda chete kumumhanzi wemumhanzi app, uye nenziyo dzakadzingwa? Ini ndaive ndaisa tsamba idzo mushanduro dzakapfuura ndaigona kudziverenga zvakakwana, asi kwete izvozvi.
Pindura Dany Ruiz
Ini ndinodzvanya bhatani rakasarudzika uye hapana nzira inoitwa iyi chiito. Rwiyo irworwo runodzokororwa nguva dzese
Pindura kuna Genis
Iyo iPhone 7 inosvika muIndia pamutengo unorambidza
Iyo yepamutemo Big Brother app yadzoka kuzadzikisa iyo chaiyo show